Musharaf oo Pakistan ku soo noqday - BBC Somali - Warar
Musharaf oo Pakistan ku soo noqday
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Maarso, 2013, 13:42 GMT 16:42 SGA
Taageerayaasha Musharraf oo soo dhaweeyay.
Madaxweynihii hore ee Pakistan Pervez Musharraf, ayaa ku soo noqday Pakistan kadib markii uu afar sanno waddanka ka maqnaa. Diyaaradiisa ayaa ku soo degtay Karachi halkaasoo boqolaal qof ay ku soo dhaweeyeen.
General Musharraf, ayaa qorshaynaya inuu xisbigiisa hogaamiyo doorashada dhacaysa bisha May.
Wuxuu BBC u sheegay inuu qiirooday markuu Pakistaan ku soo noqday, laakiin uu og yahay qatarta ammaankiisa.
Talenbaan ayaa u hanjabay inay dilayaan, waxaana la joojiyay in isku soo bax la sameeyo.
Musharraf ayaan haysan taageerayaal daacad u ah, lamana hubo in milatariga uu rabo inuu siyaasada ku soo noqdo.